Bacary Sagna: Waan farax sanahay maadaama aan soo laabtay, mar ayaanse murgooday. - Caasimada Online
Home Warar Bacary Sagna: Waan farax sanahay maadaama aan soo laabtay, mar ayaanse murgooday.
Bacary Sagna: Waan farax sanahay maadaama aan soo laabtay, mar ayaanse murgooday.
Daafaca midig ee kooxda Arsenal Bacary Sagna ayaa sheegay inay la yaab ku noqotayu inuu soo bogsaday ka dib markii uu kasoo muuqday kulan ay ciyaarayeen ciyaartoyda 21 jirada ka hooseeya ee kooxdiisa.
29 jirkaan ayaa lugta ka jabay markiisii labaad isagoona 12 bilood aan garoomada cag soo dhigin ka dib markii bareelo lagu qaaday kulankii ay kooxdiisu bishii May 2011 wajahday kooxda Norwich. Daafacaan ayaana sugaayey waqti uun inuu dhaawiciisa kasoo bogsoodo.
“La yaab ayey igu noqotay inaan soo laabto, waxaan sugaayey ilaa iyo waqtigaan shan bilood,” ayuu Sagna u sheegay website-ka rasmiga ah ee kooxdiisa Arsenal.
“Tani waxay aheyd mid diiradu ii saarneyd: inaan soo laabto aana ciyaaro, markii iigu horeysay kooxda ka yar 21 jirada. Wax wakba si fiican ayey u dheceen guul ayaana gaarnay, sidaas darteed aad ayaan u farax sanahay.
“Si adag ayaan run ahaantii usoo shaqeeyey. Waqtiyada qaar waxaan joogay xarunta baxnaaninta, ka dibna waan soo laabtay run ahaantii si adag.
“Markii aad mar jabot jab weyn, waad kasoo bogsaneysaa, laakiin laba mar wey adag tahay. Maskax ahaan waa murgoonaayey, laakiin maalintii xigtay tartan ayaan diyaar u ahaa. Markaasoo aan si xoogan usoo kabsaday maantna si wanaagsan ayaan u farax sanahay.”